ဆတ်နွား - ဝီကီပီးဒီးယား
Distribution of the common eland over the ဆာဗာနားs and လွင်ပြင်s in eastern and southern အာဖရိက
ဆတ်နွား (ခေါ်) (အင်္ဂလိပ်: Common Eland, lit. 'အီလန်တောဆိတ်') ကို အီလန်ဆိတ်သမင်၊ ရိုးရိုးအီလန်၊ တောင်ပိုင်းအီလန် စသည်ဖြင့်လည်း ခေါ်တွင်သေးသည်။ အာဖရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရှိ မြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသများနှင့် ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင်များတွင် ကျက်စားသော တောဆိတ် (အန်တီလုပ်) တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဘိုဗီဒေးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။
တောဆိတ် (အန်တီလုပ်)အများစုသည် ‌ကြောက်ရွံ့တတ်‌သော်လည်း ‌မြေကြီး မှ ပခုံးစွန်းအထိ ၆ ‌ပေမြင့်သည့် ဆတ်နွားမှာ မ‌ကြောက်ရွံ့‌ချေ။ ဆတ်နွားများသည် ရာနှင့်ချီ၍ အုပ်ဖွဲ့ကာ ကျက်စားကြသည်။ ဆတ်နွားသည် မြင့်လည်းမြင့်၊ အား လည်း‌ကောင်းသည်။ ဆတ်နွား၏ ‌သေးသွယ်၍ တွန့်လိမ်လျက်ရှိ‌သော ဦးချိုသည် နှစ်‌ပေခွဲရှည်၏။ မျက်စိနှစ်လုံးကြား နဖူး‌ပေါ်၌ အ‌မွေးမည်းများစုလျက်ရှိသည်။ ထိုအ‌မွေးမည်းများသည် ဆတ်နွားအဖို၌သာရှိ၍ အမတွင်မရှိ‌ချေ။ အမ၏ ဦးချိုသည် အဖို၏ဦးချိုထက် ပို၍ ရှည်‌သော်လည်း အဖို၏ဦးချို‌လောက် မခိုင်ခံ့‌ချေ။
ဆတ်နွားများကို အီသီယိုးပီးယား၊ ကင်ညာ၊ တောင်ဆူဒန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ယူဂန်ဒါ၊ ရဝမ်ဒါ၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘော့ဆွာနာ၊ လီဆိုသို၊ ဆွာဇီလန်၊ မာလဝီ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ နမီးဘီးယား၊ ဇမ်ဘီယာ၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်။
↑ IUCN SSC Antelope Specialist Group (2008). "Tragelaphus oryx". IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. old-form url
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ p. 696–7။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Pappas, LA; Elaine Anderson; Lui Marnelli; Virginia Hayssen (5 July 2002). "Taurotragus oryx" (PDF). Mammalian Species 689: 1–5. doi:10.1644/1545-1410(2002)689<0001:TO>2.0.CO;2.
ဤ နို့တိုက်သတ္တဝါအကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆတ်နွား&oldid=716516" မှ ရယူရန်
ကင်ညာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ရဝမ်ဒါနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
လီဆိုသိုနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဆွာဇီလန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
မာလဝီနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
နမီးဘီးယားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ